ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Sunday, January 27, 2013
ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါရှိလို့ သောက်ရတဲ့ သွေးကျဆေးတွေမှာလဲ ရှိတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုးကျိုး ကြောက်လို့ ဆေးမသောက်ဘဲ မနေပါနဲ့။ သွေးတိုးကျဆေး သတိပေးပါရစေ။ မသောက်ပါနဲ့လို့ မဟုတ်ပါ။ ဆက်သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပါ။
“လူကြီး ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက် သွေးတိုးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၆၁% ဟာ ဆေးကုသမှု လုံလောက်အောင်မယူကြဘူး။ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်က သွေးတိုးကို ထိန်းထာတဲ့အထိ မလုပ်ကြဘူး” လို့ American Heart Association အမေရိကန် နှလုံးရောဂါ အသင်းက ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေထဲမှာ သွေးကျဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ ဆေးကို ဆရာဝန် ညွှန်တဲ့အတိုင်းမသောက်ကြတာလဲပါတယ်။ “သွေးတိုးကျစေတဲ့ဆေးပေါင်း ၂ဝဝ ရှိတယ်။ ဒီလိုအများကြီးထဲကနေ လူနာအတွက်အသင့်ဆုံးဆိုတာ ရွေးပေးရပါတယ်။” လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သောမတ်စ်-ဂေးလ်စ် ကပြောပါတယ်။ ဆေးကြောင့်ဘာတွေခံစားရနိုင်သလဲ -
သွေးကျဆေးတွေထဲက ဆီးသွားစေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ရင် အနည်းနဲ့အများ အနည်းအပါး ကိုယ်ရောင်စေနိုင်တယ်။ ခြေမျက်စိ၊ ခြေသလုံးမှာရောင်တယ်။ အထူးသဖြင့် Calcium channel blockers အုပ်စုသွေးကျဆေးတွေထဲက Amlodipine (Norvasc) နဲ့ Nifedipine (Procardia) တွေကရောင်စေတယ်။ 5. Sexual Dysfunction လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲ
လူတိုင်းဟာ မတည့်တာရှိတတ်တယ်။ အစားအသောက်မတည့်သလို ဆေးကိုလဲမတည့်ကြဘူး။ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ မတူကြပါ။ မတည့်တာကိုတော့ ရှောင်ရတယ်။ သွေးတိုးရှိလို့ ဆေးသောက်နေရသူတိုင်း
3. High blood pressure သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။ 4. ဆေးကုသမှု စနစ်တကျမရှိရင် Stroke ဦးနှေညက်သွေးကြောပျက်စီးတာ၊ Heart attack နှလုံး (အတက်) ရတာ၊ Heart failure နှလုံးကနိုင်အောင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာ နဲ့ Kidney failure ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သွေးတိုးကို Silent killer တိတ်တိတ်လေး အသက်သေစေအောင်လုပ်တာလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခြောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ 5. သွေးတိုးနှင့် တခြားဆေးတွေ -
• NSAIDs and High Blood Pressure အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Aspirin, Ibuprofen နဲ့ Naproxen တွေက သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။ • Cough and Cold Medications အအေးမိသက်သာဆေးတွေမှာလဲ NSAIDs တွေပါနေလို့ သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။
• Decongestants အအေးမိသက်သာဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဒီဆေးမျိုးကနေလဲ သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။ • Migraine Headache Drugs (မိုင်ဂရင်း) ဆေးတွေကလဲ သွေးကြောကို ကျဉ်းစေတာမို့ သွေးဖိအားတက်စေနိုင်တယ်။